Judo Analamanga : mpikatroka 144 hiady izay ho tompondaka | NewsMada
Judo Analamanga : mpikatroka 144 hiady izay ho tompondaka
Herinandro taorian’ny nahavitan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, amin’ny taranja judo izay notanterahina teto Madagasikara, hanatontosa ny anjarany ihany koa ny ligin’Analamanga. Araka ny fandaharam-potoana, hotontosaina etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina izany, ny 29 sy 30 avrily ho avy izao. Hahatratra 144 mianadahy ireo mpikatroka hiady izay ho tompondaka amin’ity, izay avy amin’ny klioba 12. Tsy ho anisan’ireo hifaninana kosa ny Elite.
Nambaran-dRamatoa Vola, filohan’ny ligy fa hifantenana izay handrafitra ny ekipan’Analamanga ity fiadiana ny ho tompondaka ity, ka hiatrika ny «Tournoi International de La Réunion», hatao ny volana jolay ho avy izao. Na izany aza, hiankina amin’ny fahafaha-manao ny hitondrana mpikatroka amin’izany, ka izay azo antoka fa hitondra medaly no hiatrika azy io.
Mandra-piandry izany, hatao rahampitso alarobia ny antsapaka amin’ity fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga ity, ary ny fandanjana kosa dia ny zoma 28 avrily, ho an’ny sokajy « minime – junior» ary ny asabotsy kosa ny an’ny «cadet – sénior». Marihina fa ampiharina amin’ity ny fitsipika vaovao, izay efa natao nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, farany teo. Hiahy ity fifaninanana ity ny lehiben’ny faritra, Rakotonanahary Ndranto sy ny filohan’ny federasiona, Randrianasoloniaiko Siteny.